Xog dheeraad ah oo laga helay sababta Shirkadda Sahan Research looga mamnuucay Soomaaliya | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Xog dheeraad ah oo laga helay sababta Shirkadda Sahan Research looga mamnuucay...
Xog dheeraad ah oo laga helay sababta Shirkadda Sahan Research looga mamnuucay Soomaaliya
WasaaraddaAmniga ee Xukuumadda Federalka waxay ka mamnuucday Hay’adda Cilmi-baarista Sahan Research inay ka hawlgalaan gudaha Somalia, sababo la xiriira iyagookhatar ku ah Amniga iyo Qaranimadda Somalia.
Sababahasoo dedejiyey in la joojiyey hawlihii ay Hay’adda Sahan Research ka waday Somalia ayaa waxaa ka mid ah iyadoo Agaasimaha Hay’addaasi oo lagumagacaabo Matt Bryden uu ka hadlayKhilaafka Dowladda Soomaaliya iyo Maamul-gobaleedyadda.
Wareysi bishan December 14-dii lagu soo daabacay Wargeyska Washington Post ayuu kaga hadlay Xarigii Mukhtaar Roobow iyo Aragti uu ka bixiyey Khilaafka Dowladda Dhexe ee Federaalka iyo kuwa Maamul-gobaleedyadda.
Waxauu si aan ganbasho lahayn u sheegay inay Dowladda Soomaaliya tijaabinayso Rabitaankeeda lidkaku ah rabitaanka Maamulladda xubnaha ka ah Federalka.
“Taniwaxay aad ugu eg tahay sidii ay Dowladda isugu tijaabinayso inay Rabitaankeeda u adeegsato mid ka dhan ah rabitaanadda Dowlad-gobaleedyaddaxubnaha ka ah DFS” ayuu yiri Agaasimaha Hay’adda Cilmi-baarista ee SahanResearch, Matt Bryden.